चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली | चितवन पोष्ट
गृह » चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली
चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली
यो सम्पादकीयको शीर्षक नेपाली समाजमा प्रयोग भएर धेरै वर्ष बित्यो । तर, यसको औचित्य भने अझै पनि समाप्त भइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा काठमाडौँ प्रहरीले चिकित्सा क्षेत्रका चर्चित प्राध्यापक एवम् सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदातलको मानहानि गरेको आरोपमा गत सोमबार राति आठ बजे उनको अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरेर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेकोमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ र मानवअधिकारकर्मीहरुले निन्दा गरेका छन् । उनलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा मंगलबार माइतीघर मण्डेला काठमाडौँमा विरोध ¥याली प्रदर्शन गरियो । उनका केही अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको मानहानि भएको आरोप सर्वोच्चले लगाएको छ । स्मरणीय छ, गृह मन्त्रालयसमेतको कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत विरोध गरेका छन् । यो पक्राउ प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
डा. गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त माफियातन्त्रविरूद्ध लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । पटकपटकको अचुक अनशनको अस्त्रबाट उनले विगतमा धेरैपटक सरकारलाई झुकाइसकेका छन् । अहिले सर्वोच्चको यौटा फैसलामाथि चित्त नबुझेर प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध विष वमन गरेका थिए । त्यसबाट प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको समेत मानहानि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनलाई पक्रेर सर्वोच्चमा हाजिर गराउन आदेश दिएको थियो । तर, डा. गोविन्द केसीजस्तो सम्मानित व्यक्तित्वलाई रातिको समयमा पक्राउ गरी एकरात हिरासतमा राख्नु अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो । उनको यो गिरफ्तारीको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
प्राध्यापक डा. केसीलाई प्रहरीले चौधौँपटक आमरण अनशन बसेको स्थानबाट पक्राउ गर्दा उनले कुनै विरोध जनाएनन् । उनले आफ्नो व्यक्तित्वलाई सत्य, निष्ठा र आदर्शको प्रतीक बनाइसकेका छन् । गरिब बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरुमा पटकपटक पुगेका उनको कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । उनले अहिलेसम्म जेजति काम गरेका छन्, त्यो देश र जनताकै लागि समर्पित छ । यस्ता आदरणीय व्यक्तित्वलाई काठमाडौँ प्रहरीले चोर, डाँका र ज्यानमारालाई पक्राउ गर्ने शैलीमा रातारात पक्राउ गरेर एकरात हिरासतमा राखेर कस्तो बहादुरी देखाउन खोजेको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाल प्रहरीले दिनुपर्ने भएको छ । विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो दुव्र्यवहारलाई माफ दिन नागरिक समाज तयार छैन । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई त चित्त नबुझेको डा. केसीको गिरफ्तारी प्रक्रिया अवश्य पनि युक्तिसंगत र विधिसम्मत छैन । महिनौँदिनदेखि भागेर हिँडेका अपराधीलाई पक्रन पनि यस्तै सक्रियता देखाएमा मात्र नेपाल प्रहरीको यो पाप पखाल्न सकिएला ।
इतिहास पुरूषको स्मरण गर्दा
निर्माण सामग्रीको मूल्य घटाऊ